संविधान संशोधन प्रस्तावमा के छ ?(विस्तृत हेर्नुस्) - News Today
संविधान संशोधन प्रस्तावमा के छ ?(विस्तृत हेर्नुस्)
राजविराज, १५ मंसिर । संसद सचिवालयमा दर्ता भएका दर्ता गरिएको संविधान संशोधन प्रस्तावप्रति संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा, संघीय गठबन्धनलगायतले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
संशोधन प्रस्तावमा प्रदेश नम्बर पाँचका पहाडी जिल्ला टुक्राउने र ती जिल्ला प्रदेश नम्बर चारमा मिसाउन प्रस्ताव गरिएको छ । संशोधन प्रस्तावमा राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट महिला दलित र अपाङ्ग एक जना र बाँकी जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रस्ताव ल्याईएको छ । भाषा आयोगको सिफारिशका आधारमा थप भाषालाई पनि राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिने कुरा पनि संशोधन प्रस्तावमा समावेश गरिएको छ ।
प्रस्तावमा नेपाली नागरिकसँग बिबाह गरेर आएकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । जातीय र सामुदायिक जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशिकरण र राष्ट्रिय पहिचानको मान्यताको कहीं चर्चासम्म नगरिएको मोर्चाले जनाएको छ । संघीय गठबन्धनले जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको माग गर्दै आएको जनाउँदै संशोधनमा प्रस्ताव गरे बमोजिम संविधान संशोधन भएको खण्डमा राष्ट्रिय सभामा मधेशीहरु कहिल्यै पनि बुहमतमा पुग्न नसक्ने ठहर गरिएको छ । नेपालको कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी जनसंख्या मधेशको रहे पनि राष्ट्रिय सभामा एक तिहाई पनि मधेशी सहभागिता नहुने गठबन्धनले दावी गरेको छ ।
हेर्नुस् संशोधन प्रस्तावः
Previous : गुलामीबाट मुक्ति नपाएसम्म मधेशी जनताको अधिकार सुनिश्चित नहुनेः पूर्व न्यायाधीश यादव
Next : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भन्छन्-निर्वाचन गराउने हो भने कानून दिनुस्